အဆန်းလေးတွေ ပြချင်လွန်းလို့ ….. Shuuuuuuu တိုးတိုး ကူးလာတာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဆန်းလေးတွေ ပြချင်လွန်းလို့ ….. Shuuuuuuu တိုးတိုး ကူးလာတာ
အဆန်းလေးတွေ ပြချင်လွန်းလို့ ….. Shuuuuuuu တိုးတိုး ကူးလာတာ
Posted by etone on Aug 2, 2011 in Copy/Paste, Home & Garden | 19 comments
ဆန်းသစ်သော ကားမှတ်တိုင် ဒီဇိုင်းများ
ဘယ်ဆိုက်ထဲကလည်းတော့ မသိဘူး …group mail ၀င်လာလို့ ကြည့်လိုက်တာ … ဆန်းသစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကားမှတ်တိုင်လေးတွေ တွေ့တော့တာပါပဲ … ဒါနဲ့ … မေးလ်ထဲမှာ မမြင်ရသေးတဲ့ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေလည်း မြင်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် … ။ ကော်နက်ရှင်လေးကလည်း နည်းနည် ဖလန်းဖလန်းထနေတာနဲ့ …. ပုံတွေ အများကြီးတင်ဖို့ အခြေနေပေးတာကြောင့် …. ကူးပေးလိုက်တယ် … ။ တို့ရွာထဲက ကားမှတ်တိုင်မှာလည်း … အဲ့ဒါမျိုးဒီဇိုင်းလှလှပပလေးတွေ ထားလျှင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ … ။:P
ဒီမှာရှိတဲ့ ကားမှတ်တိုင်တွေမှာ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေကစပွန်ဆာပေးပြီး တပ်ထားတဲ့ ကော်ခုံတွေတောင် ချိုးပဲ့ ခွာယူနေတာ … သူများနိုင်ငံကလို လှတပတလေး ဖြစ်ဖို့မပြောနဲ့ … အင်္ဂါစုံစိ မြင်ရလျှင်တောင် ကံကောင်း
မမ etone ကတော့ ရှာဖွေစုဆောင်း သဋ္ဌေးလောင်း ပါပဲ
ဖရဲသီးပုံ ကားမှတ်တိုင်လေးထဲက အအေးပုလင်း လေးက သောက်လက်စလား ဟင်
ဒီမှာသာ အဲလိုဆို ဘတ်စ်ကားစီးသူတွေတော့ ထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး
စတော်ဘယ်ရီအိမ်လေး ကိုကြိုက်တယ်နော်။ရန်ကုန်မှာဆို အိမ်သုံးဆိုပြီး မရွှေ့ သွားကြမယ်ထင်တယ်နော်။လမ်းဘေးက မှတ်တိုင်က ကျွန်မတို့ ဆီက အိမ်ထက်ကောင်းနေတာကိုက ဟွန့် 
ပုံလေးတွေကအဆန်းလေးတွေပဲနော်.. မမြင်ဘူးဖူး အခုမှပဲမြင်ဖူးတယ်.. ကျေးဇူးပါဘဲ အဆန်းလေးတွေတင်ပေးလို့. .. အဲလိုပုံတွေ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိကြမယ်မထင်ပါဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ လူတွေရဲ့စည်းကမ်းကိုကြောက်လို့ထင်တယ်နော်
ကျနော် တော့ ဖရဲသီး မှတ်တိုင်လေး ကြိုက်တယ်
ဟွန်း သူတို.ကူးတော. ကောင်းတယ်:(
ရော်…… ဖိနပ်ဆိုက်ကြီး ဂိတ်ဆုံးပဲစီးတာ … ခြေရာတိုင်းချင်ပါပကောလား .. ။ ဌဲဌဲ ဌဲဌဲ
သူများလို Ctrl+c နဲ့ Ctrl+vချည်း သုံးပြီး ကူးထားတာမဟုတ်ဘူး … ။ ပုံဆယ်ပုံကျော် ကို တပုံချင်းစီ ဆိုက်ပေါ်တင်ပြီး … အင်းဆက်လုပ်ထားရတာ … ။ ၀ါသနာပါလျှင် အဲ့လို ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးလေ။ …အဲ… copy/paste ဆိုလျှင်တော့ … ပွိုင့်မရဘူးလို့ ပြေတာ ကြားဖူးဒယ် …
ကူးတော့ ကူးတယ်လေ အပေါ်မှာ Copy/Paste လဲ လုပ်ထားတယ်လေ …
ချစ်စရာလေးတွေနော် အခုလို အဆန်းလေးတွေတင်ပေးလို့ မ etone ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်ကတော့ ဖရဲသီးကြိုက်တဲ့ သူဆိုတော့ ဖရဲ သီးမှတ်တိုင်ကို သဘောကျတယ် ။တစ်ခုပဲ…..အဲဒီ ဖရဲသီးက စားလို့ မရတော့…………….. ၀င်ထိုင်မိရင် ဖရဲသီးစားချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာ…ဖရဲသီးက စာလို့ မရ..နဲ့ကိုယ်တော့ စိတ်ညစ်မိမယ်။
ရန်ကုန်ဈေးသည်များအတွက် လုပ်ပေးဖို့ တင်ပြနေတာလား ညီမလေး….. အဲလိုသာဆို ကားဂိတ်မဟုတ်ပဲ ဈေးရောင်းတဲ့သူကတောင် အိမ်လုပ်နေမယ့်ပုံပဲနော်…
အဲဒီ မှတ်တိုင်လေးတွေ ထားပေးထားရင် လူတွေ တက်နေမလားပဲ..
ထား ချင်တယ် ။ဒါပေမယ့် ကြောက်တယ် တို့မြန်မာကိုး×
ရန်ကုန်မှာသာ ဆောက်ပေးရင် သိတ်မကြာခင် ကွမ်းတံတွေးရောင် ပေါက်လာလိမ့်မယ်…
ဖရဲသီးမှတ်တိုင်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးမှတ်တိုင်ကို သဘောကျတယ်။ ချစ်စရာလေးတွေ။ ကျေးဇူးပါပဲ မမetone ရေ..
ထင်တိုင်းကြဲ တဲ့ ကောင်တွေဆီ ဒီ ဒီဇိုင်းရောက်သွားရင်..
ညီမလေးက Auto CAD တွေလုပ်နေတာဆိုတော့ Design ဆန်းဆန်းလေးတွေဆိုသိပ်သဘောကျတယ်
ခုလိုကြည့်ရတာ ကောင်းပါတယ် ma maetone ရေ…..